रिपोर्टरको डायरी : मास्कले छोपिएको पीडा- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
वैशाख १३, २०७८ मधु शाही
ढुंगाले थिचिएजस्तो भारी शरीर लिएर बिरामीको सेवामा खटिएका नर्सलाई के भयो ? भनेर सोध्ने कोही थिएनन् । बरु उल्टै बिरामीका कुरुवाले टोकसेको टोकसै थिए । यस्तो अवस्थामा डा. प्रतिज्ञा आचार्यले संयम हुँदै भनिन्, ‘सकेसम्म हेरौंला नि ! नआँत्तिनुस् ।’
कोभिड–१९ को भयावह अवस्था झेलिरहेको नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा लगातार दुईदिन स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न पुग्दा देखिएको दृश्यले समाचारको लागि लोभिने मेरा आँखा संवेदनाले भरिएका थिए ।
कोभिड विशेष अस्पतालभित्र पुग्न नपाउँदै बाटोमै चारवटा शव स्टेचरमा लस्करै राखिएको थियो । शव कालो प्लास्टिकमा पोका पारेर बेरिएका थिए । मानौं ती कुनै फाल्तु सामान हुन् । न त्यो शव सम्झेर रुने कोही थिए न हेर्ने । एक मिटर पर कसैले मोबाइल तेसाईरहेका थिए । फोटो र भिडियो खिच्दै थिए । त्यो देखेर फेरि मनमा लाग्यो कि यी शव कुनै चर्चित व्यक्तिका हुन् । कोरोनाले ‘मास्क’ भित्र हाम्रो ओठका मुस्कान लुकाएको त छ नै, सँगै पीडाको चित्कारसमेत बन्द गरिदिएको छ । आफन्त मर्दा खुलेर रुन पाउँदैनन् आफन्तिहरु । कोक्रोजस्तो ठूलो मास्कले ढपक्कै अनुहार छोपिदिन्छ, आवाज बन्द गरिदिन्छ ।
पत्रकार सुदिप मल्ल त्यही मास्कभित्र पीडा गुम्साउँदै उभिएका थिए । नाक, मुख ढपक्कै छोप्ने गरी पोको पारिएको शवमा आँखा डुलाइरहन्थे । दुई दिनअघि मात्रै अस्पताल भर्ना गरेका उनले अचानक आमा गुमाए । आमासँगै ममता गुमाए । ‘जसको कोखबाट जन्मिएँ, उसैलाई छुन नपाइ बिदा गर्नुपर्ने, कस्तो दिन आइपर्‍यो ?’, उनी कालो पोका हेर्दै भन्थे, ‘आई मिस्ड यू मुमा ।’
उनको भाषामा विगतको समिक्षा झल्किन्थ्यो । उनले यस्तो भयावह स्थिति आउनुमा भारतसँग जोडिएको जमुनाह नाकामा चरम लापरबाही गर्नुले भएको बताउँछन् । साथै, सर्वसाधारण आफैं पनि महामारी फैलाउनेमा मुख्य जिम्मेवार हुन् । स्वास्थ्य मापदण्ड नपनाई निर्विग्न घुमफिर गर्दाको परिणाम हो यो । बाँकेको स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासन, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज सबै भगवान भरोसामा छन् ।
हुँदैछ, गर्दैछौँ, छिट्टै हुन्छ जस्ता मीठा शब्दले महामारी नियन्त्रण हुँदैन । केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकारले बाँकेका छटपटाइरहेका बिरामीको उपचारमा सहयोग गर्न जरुरी छ । बेड नपाएर, जनशक्ति नपुगेर, बिरामीको मृत्यु हुनु भनेको राज्यको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठ हो ।
प्रकाशित : वैशाख १३, २०७८ १४:५०
वीरगन्जमा एउटै बेडमा तीन जना संक्रमितको उपचार हुँदै
वैशाख १३, २०७८ भूषण यादव
वीरगन्ज — संक्रमण दर उच्च रहेको पर्सामा पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि बेड अभाव भएको छ । नारायणी अस्पतालको आकस्मिक विभागको एउटै बेडमा तीन–तीन जना कोरोना संक्रमितलाई राखेर उपचार भइरहेको छ ।
नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा सञ्चालित आइसोलेशन वार्डमा उपचार गराइरहेका कोरोना संक्रमित । तस्बिर सौजन्य : डा.निरज सिंह
नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. निरजकुमार सिंहका अनुसार वीरगन्जको अवस्था भयावह भइसकेको छ । ‘दिनदिनै नयाँनयाँ सिकिस्त बिरामी अस्पताल आइरहेका छन्,’ कान्तिपुरसँग डा. सिंहले भने, ‘मान्छेको आवागमन रोक्न ढिला भइसक्यो । वीरगन्ज र आसपासका क्षेत्रमा लकडाउन लगाउन जरुरी छ ।’
डा. सिंहका अनुसार एक रातमा ठूल्ठूला ५० वटा अक्सिजन सिलिन्डर सकिइरहेको छ । ‘होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित र तिनका परिवारले फोन गरी अक्सिजन लेभल तल गयो, अस्पतालमा बेड मिलाइदिनु पर्‍यो भनिरहेका छन्,’ आकस्मिक कक्ष बाहिर भेटिएका डा. सिंहले भने, ‘सरकारी अस्पतालको आइसोलेसन वार्ड मात्र हैन्, निजी अस्पतालका बेड समेत भरिएका छन् । मैले कहाँ र कसरी बेड मिलाउँ ।’
अस्पतालका कोभिड संयोजक डा. सरोज रोशन दासका अनुसार नारायणीको आइसोलेसनमा ४९ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । ‘भर्ना भएका सबै संक्रमितलाई अक्सिजन दिइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘लक्षण नभएका र सिकिस्त नरहेका संक्रमितलाई राखेका छैनौँ ।’ सिकिस्त बिरामी आउने क्रम बढेपछि अस्पतालले थप ४८ शय्याको आइसोलेसन वार्ड बनाएको छ । डा. दासका अनुसार सोमबार साँझसम्म ४८ शय्याको नयाँ आइसोलेसन वार्ड सञ्चालनमा आइसक्ने छ । ‘नयाँ वार्ड सञ्चालनमा आएसँगै हामीलाई जनशक्तिको अभाव हुनेवाला छ,’ कान्तिपुरसँग डा. दासले भने, ‘जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रले जनशक्ति उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।’ उनका अनुसार यही दरमा संक्रमण बढे दुई/तीन दिन भित्रै पुन: शय्याको अभाव हुनेछ ।
गत चैत २९ मा जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसीसीएमसी)ले जिल्लास्थित सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु कोभिडको उपचारका लागि पर्याप्त नभएमा नेसनल मेडिकल कलेजले व्यवस्थापन गरेको कोभिड १९ अस्थायी बाबा अस्पताललाई पुन: सुरु गराउन आवश्यक व्यवस्थाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । संकट व्यवस्थापन केन्द्रले निर्णय गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि बाबा अस्पताललाई पुन: सुरु गराउन सकिएको छैन ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिमकान्त पौडेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको बताउँछन् । ‘हामीले यताबाट पत्राचार गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘उताबाट हालसम्म कुनै जानकारी आएको छैन ।’
प्रकाशित : वैशाख १३, २०७८ १४:४३
राउटे बस्ती पुग्दा...